Les gîtes d'Angres-Embindini we-Artois (gîte 3)
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uCyril Et Stéphanie iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifama endala iye yalungiswa ukuze yenze iindawo zokulala ezi-3 ezibekwe kumbindi weLens-Arras-Béthune triangle.
Iindlwana zethu ziyakwazi ukuhlalisa abantu aba-3 ukuya kwaba-4. Zicwangciswe njengezindlu ezincinci ezinomgangatho omnye apho uya kufumana yonke intuthuzelo eyimfuneko ukuze ube nokuhlala okumnandi. Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ezolileyo, kufutshane neendawo zabakhenkethi, imisebenzi yokuzonwabisa kunye neevenkile, eziya kwenza lula ukuhlala kwakho.
Izindlu zangasese azitshayi kodwa kunokwenzeka ukutshaya ngaphandle okanye kwiveranda.
Imisebenzi babatyeleli abaninzi balindelwe kuni: Louvre-Lens, Canadian Vimy Memorial, 9-9bis umhadi, Bollaert bala, Arena Liévin bala, ibhayisekile ntaba iziphaluka emasimini ngeenxa iimfumba SLAG, Olhain Park kunye enqabeni yomkhosi, kumbindi wedolophu Arras, Béthune .. .